Libanona: Doro ala sy fiakaran’ny maripàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2008 17:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, 日本語, English
Efa an-taonany maro izao no ahitana doro ala isaky ny lohataona amin’ireo hany sisa mba faritra voajanahary Libaney. Ary isan-taona, lalaovina hatrany ny fifanilihana: ireo antoko sy mpanao pôlitika dia mifanilika hatrany ho tsy nisy fiomanana momba izany ary tonga hatrany amin'ny fifampiampangana ho nanao fanahy niniana ny fandorana.Raha izany, ahoana kosa no fihevitr'ireo mpitoraka blaogy ?
Avoitran'i Kadmous [amin'ny teny arabo], ny fandravan'ny afo ireo hàbaka voajanahary Libaney ary iampangany koa ireo sampandraharaham-panjakàna ho variana amin'ny zavatra tsy dia manan-danja ka manamaivana ity resaka miankina aman'aina loatra ity.
Toa tsapa ho tsy misy fiafarany velively ity tantara mitohy sy maizina mampivarahontsana ity… Samy nahazoana ny anjara sariny daholo ireo faritra rehetra tratra teto Libanona… Tsy manavaka faritra maitso sy ngàzana ny afo… Tsy mieritreritra ny afo , mandoro aloha izy alohan'ny hahalevonany miaraka amin'izay farany hazo novonoiny. Iza no niandohana? Andriamanitra irery no mahalàla! Na inona na iza, tsy izany no olana, satria izay hany tavela tamin'ny hàbaka maitso (fa tsy ireo hàbaka) dia ho fahatsiarovana sisa … ary ny Fanjakàna, sondriana amin'ireo tetikasany sy ny fitondra fanazavana mikasika izany, tsy manana hery ho enti-mamono ny afo… ary ny vola narotsaka ho an'ny minisiteran'ny fambolena, ny fizahantany, ny atitay, ny fitsarana, ny fitaterana, ny fampitaovana ary ireo komity parlemantera isan-tsokajiny (ary io, efa hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena) dia tsy ho ampy hametrahana tetikasa ho fisorohana sy ho fisakanana ny afo vao miandoha tsy hihitatra handravarava…
I Tears for Lebanon [amin'ny teny anglisy] dia maneho koa ny fahamaizana ary mitanisa olom-panjakàna izay nilaza fa nisy miohitsy angidim-by (hélicoptères) avy any Sipra (Chypre) nampiasaina hamonoana ny afo, sy nanambara fa nisy nanao ny fandoroana (niniana):
Afo be mijoalajoala no nitranga ny talata teo tamin'ireo ala manamorona ireo tanàna efatra ao atsimo-atsinanan'i Beyrouth ka namotika hazo an'arivony maro tamin'izay nolalovany.
I Darwish Hobeika, Tale jeneralin'ny fiarovana Sivily, dia nanamarika fa fandoroana nisy nikotrika ireny (efa nomanina), nitranga talohan'ny vao mangiran-dratsy, zavatra tsy mahazatra raha resaka afo mitranga tampoka izay, ny lohataona, dia mipoitra mandritry ny ora mampigaingaina ny hafanàna.
Ny vondron'ny mpamonjy sivily sy ireo angidim-by an'ny tafika libaney niampy ireo avy any Sipra dia niezaka niady tamin'ny afo tanàtin'ny lelafo manaka-danitra sy ny setroka mandady nandrakotra ireo havoana mitatao eo ambonin'i Beyrouth.
Anaty hafatra hafa, nefa mbola mijanona amin'ny sehatry ny tontolo iainana hatrany, ny the Inner Circle [amin'ny teny anglisy] dia manazava hoa nahoana ny fiakaran'ny maripàna ny mety hahalany ritra ny hazo sedera, isan'ny ahafantarana ny firenena libaney :
Ny fanamby lehibe atrehina hatreto ho an'ny hazo sedera ato Libanona, dia ny fiovan'ny toetr'andro, hoy i Nizar Hani.
Ny faritra voajanahary mety amin'ny hazo sedera dia miala 1200 ka hatramin'ny 1800 metatra amin'ny ranomasina , hoy i Hani. Ny toetr'andro migaingaina dia midika fa tsy misy afa-tsy ny toerana avo sisa no ahafahan'ny hazo sedera miroborobo, any no mangatsiatsiaka kokoa. Fahiny, nandrakotra ireo faritra midadasika tany Tiorkia, Siria ary Libanona ny hazo sedera, nefa ny hazony sy ny ditiny dia tena nifampitadiavana tokoa hatry ny ela, toy izay voalazan'ny Epic of Gilgamesh, voasoratra efa ho taonarivo roa talohan'i Jesosy (Jesoa) Kristy sy ny fitantaràna ara-baiboly momba ny mpanjaka Solomona nampàka hazo sedera avy any Libanona mba hanangànana ny tempoliny tao Jerosalema.